Zeevou | Abaal-marinta PMS, Maareeyaha Kanaalka & Mashiinka Sii-qabashada
Abaalmarinta abaalmarinta PMS & Maareeyaha Kanaalka
Zeevou waa Nidaam Maareyn Hanti iyo Maareeyaha Kanaalka kaas oo otomaatig geliya ku dhowaad dhammaan meheradahaaga kirada ah ee muddada gaaban, hagaajiya howlaha, isla markaana yareeya khaladaadka aadanaha.
Muuqaaladda Bedelaya Ganacsigaaga Hal Mar Iyo Dhammaan
Meelaha badan ee PMS ee Zeevou waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka maamusho dhamaan guryahaaga hal marin soo gal.
Hubso in jaale kastaa sax ku rido dhammaan sanduuqyada, iyadoon loo eegin meesha ay ka yimaadeen.
Maamul dhammaan jeegagaaga - keysafes, qufulka smart, ama KeyNest - iyada oo loo marayo Zeevou.
Ku xooji duubistaada tooska ah websaydhkeena SEO-saaxiibtinimo leh oo lagu dhajiyay qalabka falanqaynta ee ugu sarreeya.
Ku riix qiimahaaga iyo helitaankaaga waqtiga dhabta ah in ka badan 200 kanaal oo leh isku xirnaantayada laba-geesoodka ah ee xoogga badan ee API.
Nidaamyada lacag bixinta ee Zeevou waxay kuu oggolaaneysaa inaad maamusho lacagahaaga, sidaas darteedna lagu hagaajiyo socodkaaga lacagta.
U oggolow shaqaalaha guriga ka shaqeeya inay si fudud u helaan macluumaadka inta ay ku jiraan safarka oo ay kaa caawiyaan maaraynta kiradaada.
Hayso aragti guud oo ku saabsan waxqabadka meheraddaada meel kasta oo ay tahay - ha noqoto xagga dhaqaalaha, degista ama hawlgallada.
Maamul dhammaan isgaarsiinta (emayllada iyo fariimaha SMS-ka) ee loogu talagalay martida iyo shaqaalaha hal meel dhexe ka socda oo wax walba la soco.
Soo gal marti-dejiye aad u jilicsan oo lagu dhisay CRM kaas oo otomaatig ka dhigaya uruurinta cinwaanka iimaylka isla markaana dhis xog-ururin ku habboon GDPR adigoon farta saarin
Qalabaynta maaraynta nadaafaddaada - ha ahaato shaqaalaha guriga dhexdiisa ama qandaraas ku siiso shirkad nadaafadeed oo dibadda laga soo diray.
Zeevou waxay u oggolaaneysaa maalgashadayaasha iyo milkiileyaasha guryaha ee la shaqeeya shirkadaha maaraynta kirada fasaxa inay u eegaan dakhligooda waqtiga dhabta ah.
Waxaan ku siineynaa Taageero Lacageed sababtoo ah waxaan si buuxda uga warqabnaa in guusheena ay ku xiran tahay taada.
Zeevou waxay awood kuu siineysaa inaad si otomaatig ah u xisaabiso xisaabinta macaashka naftaada iyo milkiilayaasha aad wax u maamusho.
Maamul dhammaan howlahaaga bartamaha, oo otomatig u samee qayb weyn oo ka mid ah hawl maalmeedkaaga maamulka.
Zeevou waxay kuu ogolaaneysaa inaad si fudud ugu dejiso sicirka jumlada guryaha badan ama aad ku riixdo sicirka adoo adeegsanaya aaladaha qiimeynta firfircoon.
Tilmaamo cusub ayaa la sii daayaa bil kasta, maadaama aan higsaneyno inaan safka hore uga jirno qaabeynta warshadaha.
Maxaa Noo Kala Duwan?
Kooxdayada 'Zeevou' waxay soo saareen dhowr astaamo gaar ah, oo ku saleysan jawaab celin ka timid isticmaaleyaasheena taas oo u saamaxeysa badeecada inay la kulanto shuruudaha nolosha dhabta ah. Waxaan aaminsanahay hal-abuurnimada, waxtarka, iyo koritaanka. Waxaan horumarinnaa, horumarinnaa oo wax u qabannaa si gaar ah. Si aad u ogaato waxa naga soocaya tartanka, taabo batoonka hoose.
Naftaada u fiirso
adoo ku xiraya 200 + Kanaal
Buuxi habeennadaada faaruqa ah adoo ku taxaya kiradaada kanaallo badan intii suurtagal ah adigoo iska ilaalinaya dib-u-habeynta. U qaybi qiimahaaga iyo helitaankaaga adigoo riixaya xoogaa qasabno ah kanaalkeena inkabadan 200 kanaalyada lammaanaha ah adoo adeegsanaya awoodda Zeevou ee awoodda, waqtiga dhabta ah, 2-way API isku xirnaanta.
Otomaatiggu waa waxa aan ku fiicanahay! Ka bilow ku soo rarida guryahaaga Zeevou, deji sicirkaaga, helitaankaaga, oo xir khadadka. Badbaadi waqtiga maamulka kuna maal geli kobcinta. Kadib dib u fadhiiso, nasasho, oo raaxayso!
Diyaar ma u tahay inaad kobciso oo aad kobciso meheraddaada? U ogolow Zeevou inuu otomaatig u noqdo howlahaaga iyo howlahaaga aan caadiga ahayn. Kaliya waxaad diirada saareysaa kordhinta faa'iidooyinkaaga. Aynu kuu qabanno hawsha culus. Fudeyd noocan ah!
Zeevou kaliya maahan PMS iyo maareeyaha kanaalka. Waxaan dooneynaa inaan yareyno ku tiirsanaantaada OTAs. Aynu ku biirno xoogagga, carqaladeeyno warshadaha oo aan ogaano Kacaanka Buugga Tooska ah! Fursadda noocan ah!
Ku soo biir Madalkeena Boos-celinta Tooska ah ee Bilaashka ah
Ku liis garee guryahaaga Zeevou Direct oo ka fiirso lacagta sida wanaagsan looga istaahilo ee diiwaangelinta tooska ah ee jeebbada ku qulquleysa. Ma ogtahay in inta badan jadwalka ballansashada laga qaado 15-25% khidmadaha? Iyada oo leh Zeevou Direct, martigaliyayaasha iyo martida labaduba waxay helayaan heshiisyo kafiican maadaama aysan jirin koox seddexaad oo goynaysa. Waxaa intaa dheer, ma jiro marti-bixiyaha iyo macluumaadka xiriirka martida oo aan laga hayn, sidaas darteed waxaad heli doontaa xiriir toos ah, toos ah. Saxiix bilaash ah hadda oo naga caawi inaan xaqiijino Kacaanka Toosinta Tooska ah! Xadhig ma leh!
Xirmooyinka Qiime-u-Qiime-Lacageed ee Dhammaan Baahiyaha
Guddiyo majiraan, dillaaliin majiraan, khidmad qarsoon majiraan!
Fursadaha loogu talagalay Macaamiisha waa kuwo aan dhammaanayn. Siidaynta Awoodda buuxda ee Zeevou adoo iska diiwaangelinaya qorshayaasheena billaha ah ama sanadlaha ah inta hartayna annaga noo daa. Soo gal dhammaan wixii Zeevou ee PMS, maareeyaha kanaalka, iyo matoorka ballansashada ay bixiyaan. Ku raaxayso mudnaanta aan xadidnayn oo naso.
(QORSHE BILAASH AH)
Soo hel websaydh SEO-saaxiibtinimo ah, ballansashada tooska ah oo liistada kiradaada ku dul qor bartayada ballansashada bilaashka ah, Zeevou Direct. Otomatig ka baaraandegista duubistaada tooska ah. Ku biir xooggaga maanta oo ka caawi shabakaddeena Marti-wadaageyaasha ballaarinta gaaritaankeena!
Eray Ku Saabsan Macaamiisha Sanadlaha ah
Markasta oo unugyadaadu badan yihiin, ayaa kaa yaraanaya inaad bixiso qayb kasta.
Wacdiye mise Gargaare?
Muxuu wehelkayaga martida u yahay Na dhahayaa
Marka hore, waxaan u maleynayaa in adeegyada iyo caawimaadda aad ka hesho Zeevou ay yihiin wax cajiib ah. Kulamada hoyga ah, xiriir toos ah oo WhatsApp ah tababarahaaga, farriinta Facebook iyo sidoo kale wada sheekaysiga tooska ah ee barta Zeevou. Ma weydiisan kartid wax intaa ka badan. Sida wax kasta oo kale, waxay qaadataa dhowr jeer in aad wax qabato illaa aad adigu la qabatimtay oo hadda waxaan helayaa waxaan hadda ku dhex wareegi karaa Zeevou aniga oo aan u baahnayn maqaallada caawimaadda iyo kuwa la isweydiiyo oo iyaguna ah aalado cajaa’ib leh oo la isticmaalo haddii aad rabto inaad waxyaabo ku tijaabiso leedahay oo naftaada wax baro. Waxay leedahay wax kasta oo aad uga baahan tahay furayaasha furaha, jadwalka nadaafadda, emayllada otomaatiga ah iyo waxyaabo kale oo aad u badan waana ku faraxsanahay inaan helay Zeevou oo aan ku sameeyay cilmi-baaristeyda ka hor inta aan lala aadin qof kale.
Hoyga Halyeeyga loo adeegsaday LTD
Waxaan u adeegsan jirnay Zeevou muddo dhowr toddobaad ah oo faa'iidada ii gaarka ah aniga ahaan ay tahay adeegga. Awood u lahaanshaha inaan qabsado mudaaharaad saacad buuxa ah wuxuu bilow fiican u ahaa safarkayga Zeevou kaas oo ay igu xigtay fadhi 1.5 saac ah oo dusha mara oo waxaan awoodaa inaan fariin ugu diro xiriirkayga Zeevou markasta oo aan jeclaado. Inaad ku cusub tahay warshadaha hoyga loo adeego waxay ahayd wax cabsi leh oo Zeevou ma ahan madal sahlan oo lagu ogaan karo, laakiin himilada fog ee shirkadda oo ay weheliso adeegga macaamiisha waxay ka dhigan tahay waan ogahay inaan helayo lacagteyda qiimaheeda!
Xalka Guryaha Cagaaran ee Cagaaran
Waxaan dhihi karaa daacadnimo dhan Zeevou noloshayda way bedeshay! Aniga oo maraya 5 maareeye kanaal meheraddayda Adeegga Degdegga ah illaa hadda, waxaan helay ugu dambayntii mid ku habboon ganacsigeenna. Si fudud, Zeevou waxay ka dhigeysaa waxyaabo aad u fudud! Waa deg deg, waa sooo fudud in la isticmaalo. Tan iyo markii aan ku soo biiray Zeevou waxaan haystay waqti dheeraad ah oo aan diiradda ku saaro meheraddayda halkii aan ka ahaan lahaa! Ganacsi ahaan SA waxaan si buuxda u taageernaa buugga ololaha tooska ah. Zeevou ayaa kaa caawineysa inaad tan sameyso. Taageerada la heli karo waa mid la yaab leh, haddii aan su'aal ku weydiiyo kooxda isticmaaleyaasha Facebook waxaan jawaab ku hayaa daqiiqado. Zeevou runti waa hadiyad bixiyaha Adeegga Guryaha ee mashquulka badan. Mahadsanid!
Waxaan ku bilaabay eber unugyo laakiin waxaan doonayay inaan wax u socdo sidii inaan haysto 100 si aan u hubiyo inaan si dhaqso leh oo wax ku ool ah u qiyaasi karo. Zeevou ma seegin wax garaac ah oo ku saabsan maareynta kanaalka waxayna ka dhigeysaa beddelka tooska ah mid toos ah, iyaga oo ugu mahadnaqaya waxaan helnay ballan 10 £ ah oo ka yimid 3-habeen oo la joogo Airbnb. Horumarka iyo hagaajintu waa kuwo joogto ah waxayna sifiican uqaataan jawaab celin waxayna hirgaliyaan isbadalo aan soojeediyey oo ah fab in la arko Xitaa ninka madaxda ah laftiisa dhib kama qabo inuu fiiriyo markaan ku dhego. Waa xirmo aad u wanaagsan waxayna layaab ku noqon doontaa sanad ama laba sano. Ku soo biir kacaanka…
Zeevou waxay ka caawisay Cliftonvalley Apartments inay ka soo baxaan 3 ilaa 15 unug. Zeevou waa aalad aad u fiican oo noo ogolaaneysa inaan si hufan u maareyno ballansashadayada, martida, maalgashadayaasha iyo dhaqaalaha. Isku-dhafnaanta 'Signable, Xero iyo Stripe' waxay ahaayeen kuwo aad waxtar u leh oo yareeyay culeyskayaga shaqo, taas oo noo oggolaaneysa inaan diiradda saarno meelaha kale ee ganacsiga. Zeevou waxay kusii socotaa wanaajinta waqtiga waxayna si deg deg ah u noqoneysaa dukaan hal-joogsi oo dhameystiran dhamaan qeybaha kaladuwan ee ganacsadeena Guryaha ladeegayo. Zeevou waxay xiiseyneysaa inay dhageysato oo ay la qabsato badeecada si ay si fiican ugu haboonaato baahiyaha adeegsadayaasheeda. Waxaan rajeyneynaa inaan isku dayno astaamaha cusub ee hadda ku jira khariiddada dhammaystiran.
Maaha isaga inuu ku faano kan waddankiisa jecel, laakiin waa inuu jeclaado kan adduunka oo dhan jecel. Baháʼu'lláh
Zeevou ayaa ku guuleysatay Abaalmarinta Keystone ee VRMB ee 2021